120volt lamba hafanana biby fiompy China Manufacturer
Description:biby fiompy azo antoka rehetra,ny torolàlana famenon-kafatra azon'ny aody ,mpanondraka trondro trondro ny fomba fiasan'izy ireo
Home > Products > Reptile Heat Pad > Under Tank Pad > 120volt lamba hafanana biby fiompy
120volt lamba hafanana biby fiompy
Model No.: XHC-F036D
Fihaonam-bokatra amin'ny alàlan'ny biby fiompy biby AC120V 16w Ny hafanana karbona dia iray amin'ny fitaovana mahomby sy azo antoka indrindra amin'ny famatsiana hafanana amin'ny helo sy ny amphibiana.Reptile sy amphibiana no mangatsiaka ary ao amin'ny toeram-ponenany voajanahary matetika no ampiasainy ny hazavana mafana avy amin'ny masoandro mba hanafana ny hafanana. .Ana fanamainty ny famaky ny reptile dia hafanaina amin'ny terrace substrate izay manao simika amin'ireny takela-masoandro ireny. Izy ireo dia loharano hafanana mandritra ny 24 ora ho an'ny karazana biby mandady sy biby fiompy ary tena ilaina ho loharanon'ny hafanana amin'ny alina ho an'ny karazam-borona maro.
Rehefa mampiasa takelaka hafanana Pet Cages ho an'ny biby fiompinao na reptile dia tena zava-dehibe fa tsy apetraka amin'ny gorodona vivarium na latabatra.
Ny tsihy dia tokony hapetraka eo amin'ny rindrin'ny vivarium na latabatra vita amin'ny sokatra mba tsy hipetraka amin'ny tsihy ny sokatra
Fototra fototra: PVC
habe: 200 * 300mm, azo ampiasaina manokana
wattage: 16w, azo ampiasaina
boloky: 120v, azo ampiasaina manokana
mari-pana ambony indrindra: 42 ℃
loko: mainty, namboarina azo ampiasaina
fotoana fitarihana: 30 andro
Shenzhen Xinghongchang Electric Co, Ltd dia naorina tamin'ny 1996, dia mpamokatra singa matihanina matihanina izay misy ao Huizhou.
Miaraka amin'ny fanandramana mihoatra ny 20 taona amin'ny famokarana singa fanaterana, dia manokana izahay amin'ny sehatry ny sarimihetsika Infared Heating lavitra ,
mitarika loharanom-angovo fanavaozana rafitra rafitra fanafana.
Raha ny ekipantsika R&D sy ny serivisy matihanina, azontsika atao ny manamboatra, manondrana ary manome ny mpanjifantsika manana sarimihetsika milay fahasalamana Far Infrared.
Nahazo mari-pahaizana ara-dalàna izahay tao amin'ny BV, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001. Ary ny vokatra dia efa nahazo fankatoavana ny CE, RoHS, Ul, ETL, sns.
Ny vidin'ny kalitao avo lenta sy mifaninana momba ny vokatra XHC dia mahatonga antsika ho mpiara-miasa akaiky amin'ireo mpamatsy marika malaza eran-tany, toy ny,
Samsung, LG, Simfer, Kohler, Panasonic, BROAN, sns. Izahay dia 100% vonona sy mahaliana amin'ny fitomboana miaraka amin'ny mpanjifantsika tsirairay mba hanadino
Fepetra fonosana: boaty loko misy boaty fanondrananaDelivery Fotoana: 30DAYS
Ny fandefasana lafo dia ara-toekarena, ny fanaterana ny rivotra ary ny fanaterana an-tsoratra koa
Q: Afaka mandefa santionany ho an'ny fanondroana ve isika?
A: Faly izahay handefa santionany amin'ny fisavana ataonao.
F: Ahoana no hanamafisana ny kalitao miaraka amintsika alohan'ny hanombohan'ny famokarana?
A: 1) Afaka manome santionany isika ary afaka misafidy ny iray na mihoatra, ary avy eo ataontsika ny kalitao amin'izany.
2) Alefaso anay ny santionanao, ary hataonay araka ny kalitao.
F: Ahoana no fomba hamahana ny olana kalitao taorian'ny varotra?
A: Manome toky roa taona izahay, raha misy olana dia andefaso sary ny olana na andefaso
santionany olana ho anay, ao anatin'ny telo andro, dia hanao vahaolana mahafa-po ho anao izahay.
F: Inona no fotoana voalohany?
A: Amin'ny ankapobeny, 30days.
Q: Azonao atao ve ny manonta ny marika an'ny vokatra?
A: Eny, mazava ho azy. Afaka manao ny marika marika mpanjifa.
F: Ahoana ny vidiny?
A: Mampanantena izahay fa ambany indrindra ny vidiny atolotra raha toa ny fampiharana mitovy, raha tsy izany
amboary ny fizarana tsena.
Fanafihana hafanana amin'ny alikaola miaraka amin'ny fanaraha-maso ny hafanana Contact Now
Mivarotra am-bangaham-bary any Etazonia PTC mafana Contact Now
Home Garden Cat Heating Pad Contact Now
biby fiompy azo antoka rehetra ny torolàlana famenon-kafatra azon'ny aody mpanondraka trondro trondro ny fomba fiasan'izy ireo Fiompiana biby fiompy ho an'ny tank Fiantohana biby fiompy mat Ny tanjon'ny fofona rehetra Fiompiana matsiro mivantana Ny tanjon'izany rehetra izany